100+ Items that share the Concept Simbabwe
A woman's plea, edited by Promise Moyo
Asazi-ke, N.S. Sigogo
Benzi ritsiudze rodzoka, Norbert Mafumhe Mutasa
Community development in pre-independence Zimbabwe : a study of policy with special reference to rural land, by N.D. Mutziwa [i.e. Mutizwa]-Mangiza
Detembai vadiki tinzwe, compiled by the Rhodesia Literature Bureau
Flickering shadows : cinema and identity in colonial Zimbabwe, J.M. Burns ; foreword by Peter Davis
For want of a totem, Vivienne Ndlovu
Godly medicine in Zimbabwe : a history of its medical missions, by Michael Gelfand ; foreword by John Denys Taylor
Grassroots leadership : the process of rural development in Zimbabwe, C.G. Mararike
Makakatanwa, naD. Hwendaenda
Many people, many voices : an 0-level poetry anthology adapted for examination purposes by the Zimbabwe School Examination Council, selected and compiled by Ellen Machingaidze [and others]
Mwoyo muti : kupfimbana nokuroorana zvaikodza mwoyo, A.C. Hodza
Ndakambokuyambira, Paul Chidyausiku
Ndonyarirepiko, rungano rwebhuku iri rwakanyorwa naGodfrey Chade ; mifananidzo naHassam Musa
Neutrality or co-option? : Anglican Church and state from 1964 until the independence of Zimbabwe, by Michael Lapsley ; foreword by Canaan S. Banana
Nhamo iri kure, A. Chinaka
Nhume Yamambo, na N.M. Mutasa
Detembai vadiki tinzwe
Godly medicine in Zimbabwe : a history of its medical missions
Mwoyo muti : kupfimbana nokuroorana zvaikodza mwoyo
Politics of the national purse : public budgeting as public policy in Zimbabwe
Soko risina musoro,
Survival strategies in rural Zimbabwe : the role of assets, indigenous knowledge, and organisations
The Book of 2 poems
The governmental system in Southern Rhodesia,
The people of the great river : the Tonga hoped the water would follow them
The political economy of the sugar industry in Zimbabwe, 1920-90
The water harvester : episodes from the inspired life of Zephaniah Phiri
Towards financial independence in a developing economy: : and analysis of the monetary experience of the Federation of Rhodesia and Nyasaland, 1952-63
<div class="citation" vocab="http://schema.org/"><i class="fa fa-external-link-square fa-fw"></i> Data from <span resource="http://link.bu.edu/resource/lvfsIJ6z97s/" typeof="CategoryCode http://bibfra.me/vocab/lite/Concept"><span property="name http://bibfra.me/vocab/lite/label"><a href="http://link.bu.edu/resource/lvfsIJ6z97s/">Simbabwe</a></span> - <span property="potentialAction" typeOf="OrganizeAction"><span property="agent" typeof="LibrarySystem http://library.link/vocab/LibrarySystem" resource="http://link.bu.edu/"><span property="name http://bibfra.me/vocab/lite/label"><a property="url" href="http://link.bu.edu/">Boston University Libraries</a></span></span></span></span></div>